Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-Emirates ibhiyozela uSuku lwe-Independence yaseJordani kwiinqwelomoya zayo
I-Emirates ibhiyozela uSuku lwe-Independence yaseJordani kwiinqwelomoya zayo
Ngamana 25, 2021
I-Emirates ibiphaphazela ukuya eJordani ukusukela ngo-1986, kwaye izakube ibhiyozela iminyaka engama-35 kulo nyaka kweli lizwe.
I-Emirates izakubhiyozela i-75 yeJordanith Usuku lokuzimela ngesitayela kulo nyaka
Abathengi abakhangela kwiinqwelomoya zabo ze-Emirates kwisikhululo senqwelomoya sase-Queen Alia baya kufumana uyilo lokuthand 'izwe kwimikhono yabo yetikiti
I-Emirates namhlanje isebenza ngeenqwelomoya mihla le phakathi kweAmman neDubai zisebenzisa i-icon A380
I-Emirates ityhile ukuba izakubhiyozela i-75 yeJordanith USuku lweNkululeko isesitayeleni kulo nyaka, njengokuba ilizwe liphawula isikhumbuzo salo esibalulekileyo. Abathengi bakhwela ezabo Emirates Iinqwelomoya ukusuka nge-24 ukuya kwi-26 ngoMeyi zinokulindela ukubanjwa okucingayo kuwo onke amanyathelo ohambo lwabo, ukusuka kwizitya eziphefumlelweyo ekuhlaleni, ukuya kwisikhumbuzo emhlabeni somsitho wokungena, nokunye okuninzi.
Abathengi ababhabhayo ngexesha loSuku lweNkululeko baya kuba nakho ukunandipha imansaf njengesinye sezona zitya ziphakelwayo ebhodini kuzo zonke iiklasi. Ukujikeleza isidlo sabo, i-knafe ezele ukhilimu iya kunikwa ekhompyutheni, ukufumana iziphumlisi ezifanelekileyo kumnandi kumava abo okupheka. I-Cabin Crew nayo iya kwabelana ngesibhengezo esikwiinkonzo ze-25th kaMeyi. Abathengi abakhangela kwiinqwelomoya zabo ze-Emirates kwisikhululo senqwelomoya sase-Queen Alia baya kufumana uyilo lokuthanda izwe kwimikhono yabo yetikiti nakwizikrini zokungena.
U-Mohammad Lootah, uMphathi weNdawo iJordani uthe: “Siyavuya ukubhiyozela uSuku lweNkululeko yaseJordani kunye nabathengi bethu, kwaye sisebenze nzima ukwenza amava abo ukuba abe ngawodwa kulo nyaka. Siyinxalenye yalo lonke uluntu esilusebenzelayo, kwaye i-Emirates iyazingca ngokuba idlale indima ekukhuliseni amashishini, ukutshintsha ubomi kunye nokwenza amathuba eJordani ngokubonelela ngonxibelelwano oluphuculweyo kunye nemveliso ephezulu. I-Emirates ineengcambu ezinzulu apha eJordani kwaye sihlala sikhangela iindlela ezintsha zokunceda enye yezona ntengiso zinamandla kulo mmandla. ”
I-Emirates ibiphaphazela ukuya eJordani ukusukela ngo-1986, kwaye izakubhiyozela i-35 yayoth isikhumbuzo kulo nyaka elizweni. I-Emirates iphuhlise ukusebenza kwayo eJordani, ukubonelela ngoqhakamshelwano ngakumbi kubathengi bayo kunye nokunyusa iinkonzo zayo kwilizwe, kwaye namhlanje isebenza ngeenqwelomoya mihla le phakathi kweAmman neDubai zisebenzisa i-A380, kwaye ziya kunyusa iinqwelomoya ukuba zenze imisebenzi yemihla ngemihla ukuqala ngoJulayi .